Mareykanka oo cunoqbatayn ku soo rogay ganacsade Soomaali ah oo lagu eedeeyay in uu taageero kooxda ISIS - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMareykanka oo cunoqbatayn ku soo rogay ganacsade Soomaali ah oo lagu eedeeyay in uu taageero kooxda ISIS
February 10, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Hoggaamiyaha garabka ISIS ee Puntland/Soomaaliya, Cabdiqaadir Muumin. [Sawirka]
Washington-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa cunoqbatayn ku soo rogay ganacsade Soomaali ah oo lagu eedeeyay in uu taageero kooxda ISIS ee ku sugan Puntland, Soomaaliya.
Bayaan ay soo saartay Waaxda Hanti-dhowrka Mareykanka Jimcadii, ayay ku sheegtay in ay cunoqabateyn ku soo rogtay Maxamed Mire Cali Yuusuf iyo shirkadihiisa oo kala ah Liibaan iyo Mutafaq isaga oo sabab looga dhigay taageero uu siiyay garabka ISIS ee Soomaaliya.
Maxamed Mire Cali Yuusuf oo sidoo kale loo yaqaan “Soo Dareeri”, waa ganacsade Soomaali ah oo fadhigiisu yahay magaalooyinka Boosaaso iyo Dubai.
Kooxda yar ee ISIS oo uu hoggaamiyo taliye horey uga tirsanaa Al-Shabaab, Cabdiqaadir Muumin, ayaa ka howlgalaysay gobolka Bari ee Puntland tan iyo sanadkii 2015. Waxayna sheegteen masuuliyada weeraro aragagixiso oo ka dhacay Boosaaso.
Dabayaaqadii 2017, Mareykanka ayaa duqeyntiisii ugu horeysay qaaday oo ka dhan ah maleeshiyada ISIS ee Soomaaliya, waxaana lagu dilay dhowr dagaalyahan.
Garoowe-(Puntland Mirror) Shan xubnood oo katirsan Al-Shabaab iyo ISIS ayaa waxaa toogasho ku fuliyay ciidamada Puntland, sida ay sheegeen ilo-wareedyo haayadaha ammaanka katirsan. Toogashada ayaa ka dhacday magaalo xeebeedka Boosaaso subaxnimadii Khamiista, ilo-wareedka ayaa intaas [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Burcadbadeeda Soomaaliya ayaa sii daysay markab ganacsi oo ay afduubteen horaantii asbuucaan, sida sarkaal katirsan ciidamada badda Puntland uu u xaqiijiyay warsidaha Puntland Mirror. Mowliid Xasan oo katirsan ciidamada badda Puntland ee PMPF [...]
Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa xalay oo Talaado ahayd dhaqaale abaal-marin ah guddoonsiiyay ciyaartoyga kubada cagta Puntland. Madaxweynaha ayaa mid 1,000 oo dollar siiyay ciyaartooyga oo dhawaan Puntland oo matalayay ciyaaraha kubada cagta [...]